Bilal ibn Rabah - ဝီကီပီးဒီးယား
Bilal ibn Rabah  ( အာရပ်: بلال ابن رباح‎ အာရပ်: بلال ابن رباح‎ အာရပ်: بلال ابن رباح‎ အာရပ်: بلال ابن رباح‎ ; Bilal al- အဖြစ်ကိုလည်းလူသိများ 580-640 အေဒီ) Habashi , Bilal ibn Riyah နှင့် ibn Rabah), အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်သစ္စာစောင့်သိတဦးဖြစ်ခဲ့သည် Sahabah ၏ (အပေါင်းအဖော်) အစ္စလာမ့်သောပရောဖကျ မိုဟာမက် ။ သူကမွေးဖွားခဲ့သည် မက္ကာ နှင့်ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ် muezzin မိုဟာမက်ကိုယ်တော်တိုင်ကရွေးချယ်။    သူဟာသူတို့ရဲ့လူတွေကိုကိုခေါ်တော်မူသောအဆင်းလှသောစကားသံကြောင့်လူသိများခဲ့သည် ပဌနာ ။ သူက 57 ၏အသက်အရွယ်မှာ 640 သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
၂ Bilal ရဲ့အသွင်အပြင်
၃.၁ Bilal ၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း
Bilal ibn Rabah ထဲမှာမက္ကာမွေးဖွားခဲ့သည် Hejaz ယခုနှစ် 580 အေဒီတွင်။  သူ့ဖခင် Rabah ၏အဆွေအမျိုးတစ်ဦးထံမှအာရပ်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့သည် Banu Jumah ကသူ့မိခင်, Hamamah ၏ဟောင်းတစ်ဦးမင်းသမီးလေးစဉ် Abysinna Amul-မှီအောင် (အမဖကျြဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှု၏အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူ (ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုအီသီယိုးပီး) Ka'aba ) နှင့်ကျွန်စနစ်ထဲသို့သွင်းထား။ ကျွန်ခံနေရာသို့မွေးဖွားခံရခြင်း, Bilal သူ့သခင်အဘို့ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြားရွေးချယ်စရာခဲ့ Umayyah ibn Khalaf ။ အလုပ်ကြိုးစားမှုမှတဆင့် Bilal ကောင်းတစ်ကျွန်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်နှင့်အာရေဗျ၏ Idol မှသော့နှင့်အတူအပ်နှင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့်အာရေဗျ၏ sociopolitical အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်မြတ်သောအနေအထားကိုရရှိထံမှ Bilal တားဆီး။
သူ့စာအုပ်, Bilal ibn Rabah အတွက်မိုဟာမက်အဗ္ဗဒူ-Rauf, ပြည်နယ်များ,
"သူ [Bilal] တောက်ပမျက်စိနှင့်ချောမောအထင်ကြီးအရပ်, မှောင်မိုက်အညိုရောင်အသားအရေတစ်ဒဏ်ငွေနှာခေါင်းနဲ့တောက်ပတဲ့အသားအရေ၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်နက်သော, နူးညံ့, အချက်မှာအသံနှင့်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ သူကနှစ်ဦးစလုံးပါးပါးလွှာသောမုတ်ဆိတ်ဝတ်ဆင်။ သူကကြီးမြတ်ပညာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်မိမိကိုယ်မိမိလေးစားမှုတစ်ခုသဘောမျိုးနှင့်ပြည့်စုံ၏။ " 
အလားတူပင် ဝီလျံ muir သူ့စာအုပ်ထဲတွင်မိုဟာမက်, ပြည်နယ်များ၏ဘဝ,
"သူ (Bilal), အရပ်ရှည်ရှည်မှောင်မိုက်နှင့်အာဖရိကအင်္ဂါရပ်များနှင့် Bushi ဆံပင်နှင့်အတူရှိ၏။ " 
muir ကိုလည်း၏မြင့်မြတ်သောအဖွဲ့ဝင်များကဖော်ပြထားသည် Quraysh Bilal မထီမဲ့မွငျပွုနှင့် ibn Sauda (ထိုအနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏သား) ကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့သည်။
မိုဟာမက်ကသူ့လိုကျထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်များ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဟောပြောဖို့စတင်တဲ့အခါမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ , Bilal ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမှအစောဆုံးပြောင်းလဲတစ်ဦးဖြစ်လာ, ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်အံ့သောစွန့်လွှတ်။ 
Bilal ရဲ့မာစတာ, Umayyah ibn Khalaf ထွက်ရှာတွေ့သောအခါသူ Bilal ညှဉ်းဆဲတော့တယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ၏ပယောဂမှာ အဘူ Jahl , Umayyah Bilal ခညျြနှောငျသူ့ကိုမက္ကာပတ်ပတ်လည်ဆွဲငင်ခဲ့ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကလေးတွေသူ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံအဖြစ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name Bilal အစား "Ahad Ahad" (ဘုရားသခင်တဆူတည်း / အကြွင်းမဲ့အာဏာသည်) ထပ်, အစ္စလာမ်ဘာသာကိုစှနျ့လှတျဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name Bilal ရဲ့ငြင်းဆန်မှာမနာလို, Umayyah လောင်းကြေးမှခညျြနှောငျသညျမိမိခြေလက်အင်္ဂါ, သဲကန္တာရနေရောင်အောက်တွင်အာရေဗျသဲအပျေါမှာပြန့်ပွား-eagled စဉ် Bilal ကျာပွတ်နဲ့ရိုက်နှက်ခံရသည်ဟုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ Bilal နေဆဲ recant ရန်ငြင်းဆန်သောအခါ, Umayyah ပူပြင်းတဲ့ကျောက်သား Bilal ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်လိုက်တယ်စေခြင်းအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သို့သော် Bilal ယုံကြည်ချက်၌ခိုငျမွဲကျန်ရစ်နှင့် "Ahad Ahad" ဟုပြောခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ဒီကျွန်၏သတင်းညျပရောဖကျအကြောင်းကြားတဲ့သူမိုဟာမက်ရဲ့အပေါင်းအဘော်, အချို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မိုဟာမက်အဘူ Bakr ရဲ့ကျေးကျွန် (ကအယူမှားအထီးနှင့်သူ၏ဇနီးနှင့်သမီး) ၏သုံးလဲလှယ်အတွက် Bilal ၏လွတ်မြောက်ခြင်းအဘို့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့အဘူ Bakr စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
မိုဟာမက်၏ဝန်ကြီးသူ့ကိုခနျ့အပျအဖြစ် Bilal, မက်ဒီနာ၏အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော်အတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့ထ Bayt Al-တှကေအသငျ့ (ဘဏ္ဍာတိုက်) ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ဒီစွမ်းရည်များတွင် Bilal မုတ်ဆိုးမတို့ကို, မိဘမဲ့, ခရီးသွားသောများနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထောကျပံ့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့သူကိုအခြားသူများမှရန်ပုံငွေဖြန့်ဝေ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
မိုဟာမက်ပထမဦးဆုံး muezzin အဖြစ် Bilal ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ဆွန်နီမိုဟာမက်အထူးသ Bilal အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ Muezzin (ပဌနာခေါ်ဆိုသူ၏) ဖြစ်လာဖို့ရွေးချယ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆုတောင်းပဌနာဖို့မွတ်စ်လင်ကိုပဌနာကိုဘယ်လို Bilal သင်ပေးတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သို့သော်အခြားဆွန်နီအစဉ်အလာတစ်ဦးအဖော်သူတို့တစ်တွေတံပိုးမှုတ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီဆုတောင်းရာအချိန်မရောက်မှီအမွတ်စလင်သတိပေးနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးခေါင်းလောင်းမြည်သင့်ကြောင်းမိုဟာမက်မှအကြံပြုကြောင်းအကြံပြုအပ်သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သူသည်ဂျူးလူမျိုးသို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်အကောက်ခွန်ချမှတ်ရန်လိုခငျြဘူးကြောင့်ဆွန်နီအစဉ်အလာအရမိုဟာမက်ဒီအကြံပြုချက်ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name တစ်နေ့မှာအဗ္ဗဒူလာ ibn Ziyad, Yathrib (မက်ဒီနာ) ၏နိုင်ငံသား, မိုဟာမက်ကိုတွေ့မြင်သို့ရောက်ကြ၏။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အဗ္ဗဒူလာ ibn Ziyad သူဝက်နိုးသို့မဟုတ်ဝက်အိပ်ပျော်နေစဉ်တစ်ဦးသောသူသည်မိမိမြင်မက်သောအိပ်မက်အတွက်သူ့ရှေ့မှာထင်ရှားလူ့စကားသံကိုပဌနာမွတ်စလင်ခေါ်လေ့ရှိတယ်ခံရဖို့်၏ကြောင်းကိုကြားပြောသောအထံတော်သို့ရှင်းပြသည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ထို့အပြင်မှာ, လူလည်းပြောနေ၏ထုံးစံနှင့်အတူအဗ္ဗဒူလာဟာ Adhan သင်ပေးတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ဆွန်နီသမိုင်းပညာရှင်မိုဟာမက်စိတ်ကူးနှင့်အတူကျေနပ်ကြီးကမွေးစားကြောင်းဖော်ပြ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အဆိုပါ Adhan ချမှတ်ပြီးနောက်မိုဟာမက် Bilal ခေါ်သူ့ကိုရန် Adhan သင်ပေးတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ရှီအာ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဗ္ဗဒူလာ ibn Ziyad ရဲ့ပုံပြင်ကိုလက်မခံကြဘူး။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သူတို့ဟာ Adhan ကုရ်အာန် Al-Majid သူ့ကိုမှထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်နည်းတူမိုဟာမက်မှထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ဖော်ပြ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ရှီအာဟာ Adhan အိပ်မက်သို့မဟုတ် reveries မှထွက်ခွာမရနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ထို့အပွငျ Sayed လီ Asgher Razwy ပြည်နယ်များ "ဟုတမန်တော်မြတ်မှောက်ရက်ဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လိုမွတ်စ်လင်ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့အခါ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ချင်းစီဆုတောင်းပဌနာပြောနိုင်ပါလျှင်သူလည်းဘယ်လိုသူတို့ကိုသင်ပေးအခါတစ်ဦးချင်းစီများအတွက်အချိန်မရောက်မှီအအခြားသူများကိုသတိပေးနိုင်ခြင်း ဆုတောင်းပဌနာ။ " ရှီအာအစဉ်အလာအရ, ဆုတောငျးခကျြကြိုတင်ပြင်ဆင် ablutions လုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လိုမိုဟာမက်ဆုံးမသွန်သင်သူကိုကောင်းကင်တမန်သည်နှင့်မည်သို့ဆုတောင်းပဌာနပြုခြင်းဖျော်ဖြေဖို့လည်းသူ့ကို Adhan သင်ပေးတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
သူပါဝင်ခဲ့ Badr ၏တိုက်ပွဲ ။ မိုဟာမက်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်သည် အလီအိဗ်ဗြ Talib , Hamza ibn Abd Al-Muttalib , Ammar ibn Yasir , ဘူ Dharr Al-Ghifari , ဘူ Bakr , Umar , Mus`ab ibn `Umair နှင့် Az-Zubair ဘင်အယ်လ်'Awwam ကိုလည်းအဆိုပါမွတ်စလင်များ သူတို့တစ်ခုခုကုလားအုပ်နှုန်းသုံးလေးယောက်မှလူတို့သညျလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ် fit ခဲ့ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ခုနစ်ဆယ်ကုလားအုပျမြားနှငျ့နှစ်ခုသည်မြင်းဆောင်ခဲ့လေ၏။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သို့သော်များစွာသောအစောပိုင်းမွတ်စလင်သတင်းရင်းမြစ်မရှိလေးနက်တိုက်ပွဲများမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ညွှန်ပြ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name နှင့်အနာဂတ်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ Uthman သည်မိမိနေမကောင်းဇနီးအတွက်ဂရုစိုက်ရန်နောက်ကွယ်မှ နေ. Ruqayyah မုဟမ္မဒ်၏သမီး။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name Salman ရှ သူနေဆဲအခမဲ့လူကိုမပေးဖြစ်သကဲ့သို့လည်း, စစ်တိုက်ရာတွင်ပူးပေါင်းနိုင်ဘူး။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဘူ Bakr ၏အုပျခြုပျနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားပြုစုအများအပြားဇာတ်ကြောင်းပြောနှင့်ပြုစုသမိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနသောSīrat ABI Bakr al-Siddiq ခုနှစ်, Bilal ၏ပညတ်တို့ကိုအောက်, မွတ်စ်လင်ဗိုလ်ခြေလိုက်ပါသွား Said ibn Aamir Al-Jumahi ဆီးရီးယားမှ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
မိုဟာမက် 632 အေဒီသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် Bilal မပေးခဲ့ပါဘူးသူကလူတဦးဖြစ်ခဲ့သည် bay'ah မှ (သစ္စာ၏အကြိနျ) အဘူ Bakr ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ဒါဟာ Bilal ဘူ Bakr မှ bay'ah မပေးခဲ့ပါဘူးအခါ, ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်နေသည် Umar ibn al-Khattab သည်မိမိအဝတ်ကိုအားဖြင့် Bilal ဆှဲဆိုသည်ကား,
Bilal replied ရာမှ,
အဘူ Bakr ၏အပျြောအပါးအတှကျအကြှနျုပျကို emancipated လျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် , ထို့နောက်သူ့ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အဘို့တစ်ဦးတည်းငါ့ကိုထားခဲ့ပါစေ, သူသည်မိမိအဝန်ဆောင်မှုအတွက်ငါ့ကို emancipated ခဲ့လျှင်, သူ့ကိုငါလိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုဆပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏။ သို့သော်လည်းငါသည်ဘုရားသခင်၏ Messenger ကိုမိမိအအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းမပြုတော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှသစ္စာပေးဆောင်ဖို့မသွားနေပါတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အလားတူပင် Al-Isti'ab တစ်ဦး ဆွန်နီ အရင်းအမြစ်, Bilal ဘူ Bakr ပြောသည်ဖော်ပြထားသည်:
သငျသညျကိုယျအဘို့အကြှနျုပျကို emancipated ကြလျှင်, နောက်တဖန်ငါ့ကိုသုံ့ပန်းအောင်; သငျသညျအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အဘို့အကြှနျုပျကို emancipated ခဲ့လျှင်မူကား, ထို့နောက်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏လမ်းသို့သွားကြကုန်အံ့။ </br> ဤသည် Bilal ဂျီဟတ်အဘို့အသွားခြင်းငှါအလိုရှိသောအခါကဆိုပါတယ်ခဲ့သည်။ အဘူ Bakr ထို့နောက်သူ့ကိုသွားကြကုန်အံ့။ " ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အောက်ပါအဘူ Bakr bay'ah ငှါသူ၏ငြင်းဆန်အပေါ် Bilal ကကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်:
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားဖြင့်! ငါအဘူ Bakr ဆီသို့ဦးတည်ဖွင့်မရ
သူတို့အဖြစ်ကိုငါဆန်းသစ်ငါမလို့ပဲ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
Umar နှင့်အဘူ Bakr အားဖြင့်မက်ဒီနာကနေပြည်ပရောက်ခံရ, Bilal မှပြောင်းရွှေ့လာသော ဆီးရီးယား ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အဘူ Ja'far Al-Tusi တစ်ဦးရှီအာပညာရှင်လည်း Bilal ဘူ Bakr မှသစ္စာပေးဆောင်ဖို့ငြင်းဆန်ကြောင်း lkhtiyar Al-Rijal တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
တစ်ဦးက ဆူဖီ သည်အဘယ်သူ၏အကျင့်မှအစပြုကဗျာဆရာ မဂိုအင်ပါယာ အမည်ရှိသော Purnam Allahabadi တစ်ရေးစပ်, ကြူဝါးလီတေးဂီတ သူကိုဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ရသော အချိန် အချို့အပေါင်းအဘော်တို့သည်ပို့ဆောင်ထံမှ Bilal ပိတ်ဆို့သည့်အခါရပ်တန့်ခဲ့သော Adhan (သူသည်မိမိမြင်မက်သောအိပ်မက်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သော) နှင့်ကမေတ္တာရပ်ခံ မှားယွင်းနေခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name Bilal တစ်ခု Abyssinian မူရင်းခဲ့အဖော်သူ letter "SH" (: ရှင်شဗေီ) ဟုစီရင်နိုင်ဘူးလို့ပဲ။ မိုဟာမက်၏တစ်ဦးက hadith ဟုသူကဆိုသည်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ဘုရားသခငျသညျပြင်ပကိုကြည့်ပေမယ့်နှလုံး၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖိုးထားပါဘူးအဓိပ္ပာယ်က "Bilal ၏ '' မြင်ကြ ', အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အကြားအာရုံအတွက်' 'ရောင်' 'ဖြစ်ပါတယ်" ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အတွက် Bilal ၏သင်္ချိုင်းကို Bab Al-Saghir သင်္ချိုင်း, ဒမတ်စကတ် ။
Bilal ရဲ့သေခြင်းသမိုင်းပညာရှင်များကအငြင်းပွားနေပါတယ်။ တချို့ကအခြားသူများကိုသူ 642 သေဆုံးခဲ့ယုံကြည်နေချိန်မှာသူမူကား, 638 အေဒီသေဆုံးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဟာသူသေဆုံးသောအခါ Bilal 63 နှစ်အရွယ်မှာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွန်နီပညာရှင် Al-Suyuti သည်မိမိအတွက် Tarikh Al-khulafa wrote: "သူက (Bilal) 17 သို့မဟုတ် 18 ဒမာသက်မြို့၌ကွယ်လွန်သွား AH , ဒါပေမယ့်သူကကိုယ့်ခြောက်ဆယ်ကျော်နှစ်အရွယ်မှာအချို့သော 20 AH, ဒါမှမဟုတ်ပင် 21 AH ပြောကြပါတယ်။ တချို့ကသူမက်ဒီနာသေဆုံးဟုပြောသည်ဒါပေမယ့်မှား၏။ ဒါကြောင့်၌တည်ရှိ၏ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး Al-Isabah နှင့်ထိုကဲ့သို့သော၏ Tahdhib ကဲ့သို့သောအခြားအကျင့်ကိုကျင့် တစ်ခု-Nawawi ။ " ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
Bilal ရဲ့ဇနီးသေခြင်းတရား Bilal ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါသူမဝမ်းနည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ဒါဟာသူမငိုဟုမှတ်တမ်းတင်နေသည် "ဘာနာကျင်ခံရသောဆငျးရဲ!" ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သို့သော် Bilal သောအရာကိုတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာအခါသမယ, ဆန့်ကျင်တွင် "ဖျောပွခွငျးအားဖွငျ့မိမိမယားကိုအမြင်ကန့်ကွက်! မနက်ဖြန်ငါချစ်ရာသခင်သည်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်နှင့်သူ၏အိမ်ရှင် (Hizb) ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်! " ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
Bilal ibn Rabah Al-Habashi ၏သားစဉ်မြေးဆက်ပြည်ရွှေ့ပြောင်းကြပါပြီဟုလျှောက်နေကြသည် သီယိုးပီးယား မှာရှိတဲ့ အာဖရိက ။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အတွက် Bilal ရဲ့သင်္ချိုင်းဂူ အာမန် , ဂျော်ဒန်
Bilal ရဲ့ဘဝနှင့်သေခြင်း၏ခက်ခဲဖြစ်ရပ်မှန်များကိုရည်မှတ်အချို့သဘောထားကှဲလှဲမှုရှိပါတယ်သော်လည်းအဆင့်ဆင့်၏နံပါတ်အပေါ်သူ၏အရေးပါမှု incontestable ဖြစ်ပါတယ်။ Muezzins အတွက်အထူးသဖြင့်သူတို့အား တူရကီ နှင့် အာဖရိက , အစဉ်အလာဟာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၏မူလ Practitioner ညိုလေးမွတျပါပွီ။ Bilal ၏ဇာတ်လမ်းမဟုတ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားမဟုတ်သလိုလူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုမျှမပြိုင်ပွဲအားဖြင့်တိုင်းတာလူမျိုး၏အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့အမြင်များ၏အများဆုံးမကြာခဏကိုးကားသရုပ်ပြဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ Taqwah (သီလ) ကလူတွေတိုင်းတာ။
ဘယ်မိုဟာမက်ရဲ့သရုပ်ပြနေသည် အဆိုပါ Farewell ဒေသနာ Mina အတွက်:
အိုကလူ! သင့်ရဲ့သခင်ဘုရားသခင်တပါးဖြစ်ပြီး, သင်တို့ရှိသမျှသည်အတူတူပင်ဖခင်မျှဝေပါ။ Non-အာရပ်ကျော်အာရပ်မ preference ကိုရှိပါတယ်, မအာရပ်ကျော် Non-အာရပ်များအတွက်။ အနက်ရောင်လူမျိုးကိုစိုးအဖြူလူတို့အဘို့, မဖြူကိုလူဦးကျော်အနက်ရောင်ကလူအဘို့မိမိတို့ preference ကိုမဟုတ်။ preference သာဖြောင့်မတ်တဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
- မိုဟာမက်က The Farewell ဒေသနာ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
1874 ခုနှစ်တွင် အက်ဒဝပ် Wilmot Blyden , အာဖရိကန်နွယ်ဖွားဟောင်းတစ်ဦးကျွန်, wrote:
အဆိုပါဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ Adzan သို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးနာမတော်အားဖြင့်တစ်ဦး Negro, Bilal အားဖြင့်မြွက်ခဲ့ပြီးသောလူသားမျိုးနွယ်၏တူညီသောနာရီသနျးပေါငျးမြားစှာမှာဒီနေ့ကဆင့်၎င်းတို့၏ဝရန်ဆုတောင်းချက်မှ Call, မိုဟာမက်, အိပ်မက်ကိုနာခံအတွက်ပထမဦးဆုံး Muezzin အဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူသော သို့မဟုတ်ဆော်။ ထိုသို့ပင်ကြောင်းမှတ်ချက်ချခဲ့ပြီး မဟာအလက်ဇန္ဒား အာရှ၌ဤဂုဏျ Negro ၏ဘေးထွက်နေဖြင့်အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
Non-အာရပ် Sahabah များစာရင်း
Bilal: သူရဲကောင်းတစ်ဦးက New မွေးမြူရေး , Bilal ရဲ့ဘဝအကြောင်းကို 2015 ကာတွန်းရုပ်ရှင်။
HM Ashtiyani ။ Bilal d'Afrique, le muezzin du ပရောဖကျမြား, Montreal, ဘတ်စ်အာမက်အယ်လ် Bostani, la ကိုးကား du Savoir, 1999 ISBN 2-9804196-4-8 (ပြင်သစ်)
ibn Sa'd ။ et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, III ကို့။ 232
Avnu'l-Ma'bud ။ ŞerhEbûDâvud, III ကို, 185, အိဗ်Mâce, Ezan, 1, 3
А. Али-заде။ Билалаль-Хабаши // Исламскийэнциклопедическийсловарь Archived4August 2014 at the Wayback Machine. ။ - М .: ИздательскийдомАнсар, 2007 - 400 с။ ISBN 5-98443-025-8 (ရုရှား)
အိုမာအိပ်ချ်အလီ, "အာရေဗျကျွန်းဆွယ်," Schomburg ရေးစင်တာက The New York ကပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်
al-islam.org - အစ္စလာမ်ဘာသာ၏သမိုင်းအတွက်အစေခံကျွန် Archived7August 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilal_ibn_Rabah&oldid=719870" မှ ရယူရန်